USiri ubuyela kwibhentshi yomsebenzi ukuphucula ukusebenza kwayo | Iindaba zeGajethi
USiri ubuyela kwibhentshi yomsebenzi ukuphucula ukusebenza kwayo
Njengoko kuxoxiwe, uSiri uza kuphinda ahambe kwiqela lophuhliso ukuya ukuphucula kakhulu ukusebenza kwakho phantse kuzo zonke iinkalo, okanye yile nto baqinisekisa ngayo I-Business Insider. Kuyabonakala ukuba umbono onawo eApple uhamba ngokungqalileyo ngokuvula iofisi eyimfihlo eCambridge apho iqela lezazinzulu kunye neengcali kweli candelo liza kusebenza ukuphucula ukubonakaliswa komncedisi owaziwayo wedijithali.
Ngokusekwe kwidatha echaziweyo, le ofisi ikhoyo kufutshane kakhulu kwiYunivesithi yaseCambridge, malunga ne-30 yabasebenzi be-Apple badlulisiwe. Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, eli qela likhulu linjalo yenziwe ngamalungu eVocallQ, Isiqalo esigxile kuphuhliso lwesoftware yokwamkelwa kwentetho eyafunyanwa yi-Apple ngokwayo ngaphezulu konyaka odlulileyo.
U-Apple ufuna uSiri ukuba aphucule unxibelelwano kwaye alahlekelwe yindlela yokuthetha enazo zonke iinkqubo zekhompyuter.
Njengoko usenokucinga, unikwe inkqubela phambili eyenziwa ziinkampani ezilwa nazo ezinje ngeMicrosoft kwiinkqubo zazo zokwazisa ngelizwi, ayothusi into yokuba iApple ifuna ukuthatha inyathelo kwaye ifuna ukuguqula iSiri, iyenze ukuba iphucule phantse kuzo zonke iinkalo, ngakumbi i Ukuqonda ulwimi lomntu. Kweli candelo lithile livela kuApple bafuna ukuba umncedisi wabo obonakalayo abe ngokwendalo kunxibelelwano kwaye bafuna oku susa loo ndlela yokuthetha iirobhothi ngaxeshanye Zonke iinkqubo zekhompyuter.
Ukuba onke la marhe aqinisekisiwe, ayimangalisi into yokuba ekugqibeleni kwi Iteration elandelayo ye-iOS, apho wonke umntu alindele ukubetha emarikeni kunye ne-iPhone 8 ehlaziyiweyo, iza kunye noSiri ophuculweyo kunye nokukwazi ukugcina ulwelo oluninzi kwaye ngaphezulu kwayo yonke incoko yendalo kunye naye nawuphi na omnye umntu.
Más información: I-Business Insider
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » USiri ubuyela kwibhentshi yomsebenzi ukuphucula ukusebenza kwayo
UXiaomi ufuna imizuzwana eli-10 ukuthengisa yonke iMi MIX
Ukuya kulawulo olupheleleyo kunye nokuzimela kwe-Android kwiminyaka embalwa?